Erayo yar oo ku saabsan FOS - Calaamadaha Bilaashka ah ee Bilaashka ah - free-options-signals
Calaamadaha xamuulka si aad u hawlgeliso dejinta nidaamka
Erayo kooban oo ku saabsan Calaamadaha Xulashada Bilaashka ah
by Bixiyaha Bixinta Ikhtiyaariyada Ikhtiyaariga ah ee Madaxa-bannaan
FOS - Calaamadaha Ikhtiyaarrada Bilaashka ah. Adeeg calaamado otomaatig ah "robot" waxaa soo saaray 2014 koox ganacsato maaliyadeed ah. Fikradda ugu weyni waxay ahayd in laga caawiyo dadka ka ganacsada ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaarkooda u badbaadiya waqtigooda falanqaynta suuqa. Dhowrkii sano ee ugu horreeyay, isticmaalkeedu gebi ahaanba waa bilaash. Maanta, waad u isticmaali kartaa adigoon wax waajibaad ah iska saarin, diiwaangelin ama dhigin. Fikradda ah adeegsiga xirfadaha leh waqti go'an oo go'an saamayn kuma yeelanayso natiijooyinka iyadoo dib loo dhigayo 120 sekan iyo xitaa in ka badan. Laakiin ka saarista dib u dhacaas wuxuu ku siinayaa waqti dheeraad ah oo aad ku fikirto oo aad ku lafo-gurto.
Nidaamka waxaa loo sameeyay habka ganacsaduhu u haysto waqti dheeri ah oo uu ku falanqeeyo ugana fal celiyo xaaladaha suuqa. Inkasta oo natiijooyinka guud ee "hooseeya", waxaa loo maleynayaa in ganacsaduhu uu leeyahay fursado wanaagsan oo lagu guuleysto sababtoo ah suurtagalnimada inuu ku soo galo ganacsiga qiimaha ugu fiican isla markaana uu ku shaandheeyo calaamadaha khaldan sida ku xusan xaaladaha suuqa iyo falanqaynta aasaasiga ah.
Waxaa la filayaa in dhammaan adeegsadayaashu ay aqoon qoto dheer u leeyihiin ka ganacsiga suuqa dhaqaalaha: istiraatiijiyado ganacsi oo aasaasi ah, habab, falanqeyn aasaasi ah, halista iyo maareynta lacagta, noocyada xaaladaha suuqa, iwm. luminta deebaajiga iyo musalafnimada.
Haddii ganacsaduhu aanu lahayn aqoontaas oo kale, weli wuu u isticmaali karaa nidaamka barashada iyo ku-dhaqanka xisaabaadka demo.
Faa'iidooyinka nooca la bixiyay:
Dib u dhac 120-sekan ah
Muujinta muuqaalka ah ee qiimaha hadda jira iyo meesha laga soo galo
Suurtagalnimada in wax laga beddelo qiimaha hantida ku jirta nidaamka. Shaqsi iyo caalami
Suurtagalnimada in la beddelo xadka qiimaha ganacsiga. Shaqsi iyo caalami. (Saameyn ku yeelan kartaa natiijooyinka)
Waxaan u furan nahay wadahadal iyo wadahadal. Haddii aad hayso wax fikrad ah oo ku saabsan beddelaadda nidaamkayaga, haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid adeegsiga nidaamka, haddii aad khalad ku aragtay websaydhka, iwm.
Nooca hadda jira 2.1.031721.21
Dayactirey oo maamuley Bixiyaha Bixinta Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee Madaxa-bannaan
Ma lihid xubinimo firfircoon oo mushahar qaata
iibso xubinnimo si aad ugu isticmaasho adeegga sida ugu fiican
iibso xubinnimo si aad u hesho faa'iidooyin badan oo adeegga ah
Macluumaadka xubinnimada ka soo rar serverka
Iskuxirayaasha Muhiimka ah
bogga calaamadaha lagu diro
macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nidaamka FOS
akhri shuruudaha iyo shuruudaha kahor intaadan adeegsiga adeegsan
Calaamadaha Ikhtiyaariga ah
hubi dhammaan adeegyadeenna oo ku iibso bixinta calaamadaha Telegram Messenger
lacag dheeri ah ku kasban adoo noqda lamaane
Xullo luqad cusub / Choose new language
tirtirka buuxa ee cookies ayaa laga heli karaa goobaha biraawsarkaaga. tirtirka cookies ayaa hoos u dhigi kara waxqabadka goobta
Sidee loo tirtiraa cookies?